Ahoana no fomba ahafahako manangona ny varotra SEO?
Mitady ny SEO Strategies amin'ny serasera azo antoka? Aza mijery lavitra noho ity lahatsoratra ity. Androany aho dia hizara aminao toro-hevitra mahasoa momba ny fampivoarana ny SEO momba ny varotra.
Ny tolo-kevitra rehetra dia mifandraika amin'ny fikarohana teny fototra. Araho izy ireo mba hampitombo ny fifamoivoizanao an'i Google.
Fomba fitohizan'ny fampitomboana ny varotra SEO
Ireto misy làlana vitsivitsy ahafantarana ny lisitry ny teny manan-danja indrindra amin'ny lozanao.
Mieritrereta eo ivelan'ny boaty
Mety misy ny teny fototra fototra tianao hotrarana: ny vokatrao, ny tolotra, ny marika, ny sokajy ary ny tsipika dia mandeha. Mazava ho azy fa zava-dehibe ny manatsara ny fivarotana ireo fehezanteny fototra ireo. Na dia izany aza dia misy lafiny iray hafa ilazana azy - Ireo mpifaninana aminao dia mety handanjalanja ireo teny marina ireo. Amin'ny tranga misy azy ireo dia manana rohy matanjaka kokoa ry zareo, misy ny lozam-pifidianana ambony izay havelanao hijanona. Noho izany dia tena tsara ny mahita fa misy sora-baventy ambany fifaninanana. Rehefa mikaroka ireo teny fanalahidy toy izany, dia ataovy azo antoka fa manana volavolan-dalàna tsara izy ireo ary mety hampiakatra ny fahombiazan'ny mpanjifa. Ataovy azo antoka koa fa tsy mifanentana amin'ny fehezanteny toy izany ny mpifaninana.
Mifantoka amin'ny teny fohy amin'ny teny lava
Ny teny malefaka farany dia ireo fehezanteny 3-4 izay tena voafaritra amin'ny zavatra rehetra amidinao. Araka ny asehon'ny fampiharana, rehefa mampiasa mpiseraseran'ny karoka fikarohana manokana ireo mpampiasa tranonkala, dia matetika izy ireo no mikaroka izay tena hividianany azy. Voaporofo fa ny fikarohana toy izany dia mety hiteraka fiovam-po amin'ny fivarotana toy ny generic. Milaza ny manam-pahaizana SEO fa matetika ny fisavana karazana fikarohana matetika dia alefa ao anaty boaty fikarohana Google raha mandray fanapahan-kevitra hividy entana ny mpampiasa aterineto. Ankoatra izany, ny antontan'isa dia maneho fa ny fehezanteny maromaro amin'ny endriny maro dia mety ho mora kokoa ny mitaona tsara azy noho ny tenifototra tokana maromaro na tenimiafina sokajy roa. Makà fotoana kely hieritreretana ny maha-tokana ny fanompoanao ary soraty izany. Ny teny fanalahadin'ny teny lava dia hahazoana hery hiarovana ny seho SEO.
Ny fikarohana amin'ny Amazon sy Ebay
Manomboka amin'ny fanoratana ny teny fanalahidy manan-danja indrindra ho anao ao anaty boaty fikarohana ao eBay. com sy Amazon. com - hahita lisitra soso-kevitra ianao. Ny tanjon'ireo lisitra "soso-kevitra" ireo dia ny fandinihana ireo fehezanteny izay matetika ampiasain'ireo mpividy mba hitady asa na vokatra avy amin'ny sokajinao. Raha toa ka tsy mahazo vokatra manan-danja ianao, mandehana any amin'ny Google na maotera hafa lehibe hafa ary hikaroka any amin'ny teny mampihetsi-po avy amin'ny sainao. Raha vantany vao vita ianao, andramo ny lisansa ary avereno jerena ny fikarohana eBay sy Amazon amin'ny fampiasana ireo teny fanalahidy ireo.
Mba hahazoana soso-kevitra maromaro kokoa dia ampiasao fitaovana fikarohana ho an'ny teny lava na mahasolo mpikaroka SEO.
Manantena ianao fa hoatr'izany ny tetik'ady SEO. Maro amin'ireo hetsika ireo dia tsy vitan'ny manampy amin'ny fampitomboana ny fizarana SEO momba ny varotra SEO fa koa mamorona traikefa mpampiasa tsara kokoa ao amin'ny tranokalanao, izay iray amin'ireo tetikady ara-barotra mahomby indrindra. Izany dia mampitombo ny fizahantany SEO, ny fiovam-pitenenana ary ny isan'ny mpanjifa miverimberina mba hanampiana ny orinasanao Source .